Best Cross Border ụgbọ oloko Iji Were Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Best Cross Border ụgbọ oloko Iji Were Na Europe
Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Train Travel Switzerland, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 30/01/2021)
New elu-ọsọ, cross ókè-ala ụgbọ oloko-anọgide na-emeghe edoghi gafee ụwa. Ọzọkwa, ha fọrọ nke nta mgbe iti ikuku njem banyere nkasi obi, profitability, na ọsọ nke njem. N'ebe a, e nwere ndị ọzọ na ndị ọzọ ụgbọ okporo ígwè netwọk gburugburu ụwa! Onye ọ bụla bụ n'ime cross ókè-ala ụgbọ oloko hụrụ ya n'anya!
Njem site Europe na a ụgbọ okporo ígwè bụ ihe banyere deceleration karịa ọsọ. Ka ị na-agafe mara mma sceneries na ụzọ gị na njedebe ikpeazụ, ị na-eche jụụ na ebube. N'ihi ya, na-aga cross ókè-ala ụgbọ oloko na-aghọ oge iji zuru ike, nwere ụfọdụ oge na gị onwe gị na ọbụna na-atụgharị uche.
Ya mere, ka lelee ụfọdụ ndị kasị mma cross ókè-ala ụgbọ oloko na Europe ọnụ:
Eurostar Cross Border Ụgbọ oloko
Ijikọ London na Amsterdam, Avignon, Brussels, obere, Lyon, Marseille, Paris, na Rotterdam, Eurostar bụ eleghị anya ndị kasị ewu ewu elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè ọrụ na Europe. Ọzọkwa, Getlink iche iche na-arụ ọrụ na nwere ndị ụgbọ oloko. Ha na-agazu Channel Ọwara n'etiti United Alaeze na France. Na-agba ọsọ na a netwọk nke oke ọsọ edoghi, Eurostar azụ ọnụ iri na asatọ-ụgbọ ala Class 373/1 ụgbọ oloko na iri na isi na-ụgbọ ala Class 374 ụgbọ oloko. Ha na-agba ọsọ na ruo 186 mph (300 Kilomita kwa hour). Ọzọkwa, Eurostar eburu ọzọ njem karịa niile ụgbọ elu jikọtara. Nke a na-eme ka Eurostar ọchịchị kasị okporo ígwè ọrụ na ụzọ gasị na ọ na-arụ ọrụ.
Eurostar cross ókè-ala ụgbọ oloko ga-ewe gị site na United Alaeze, France, Belgium, na Mba netherland. Plus, ọ ga-ekwe ka ị na-enweta mara mma mma nke ndị a pụrụ isiwo n'ụzọ.
Hanover na Rotterdam Ụgbọ oloko
London na Rotterdam Ụgbọ oloko
Hamburg na Rotterdam Ụgbọ oloko
Cologne na Rotterdam Ụgbọ oloko
Thalys Cross Border Ụgbọ oloko (French: [dị ka])
Ná mmalite wuru gburugburu LGV Nord elu-ọsọ dị n'etiti Paris na Brussels, Thalys bụ a French-Belgium elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè ọrụ. Eurostar train carsgbọ ala na-ekere òkè a, na-eme ka ha otu nke kasị mma cross ókè-ala ụgbọ oloko. Thalys aga si Paris, Brussels ma ọ bụ Amsterdam na London via Lille na Channel Ọwara na na French ụlọ TGV ụgbọ oloko. Plus, Thalys eje ozi Amsterdam na Cologne, oke! Nke a bụ egwu ozi ọma n'ihi na onye ọ bụla nke nwere mmasị na-nwere ọtụtụ nhọrọ maka ha njem. Thalys International, NMBS / SNCB, na German ụgbọ okporo ígwè jikwaa ya usoro mgbe THI Factory na NMBS / SNCB rụọ ọrụ ya. N'ihi ya – na Thalys – ịzụ ejegharị ejegharị na Europe bụ na-egwu!
Amsterdam na Cologne Ụgbọ oloko
Cologne ka Antwerp Ụgbọ oloko
Mabu dị ka NS Hispeed, NS International bụ okporo ígwè ọrụ na Netherlands maka onye ọ bụla na a nkọ anya maka ihe dị ịtụnanya njem ahụmahụ. NS International na-arụ ọrụ mba ofu-obodo na elu-ọsọ Cross Border Ụgbọ oloko na njikọ:
– Germany na Switzerland (Intercity-Express)
Karịsịa ihe nile, NS International ugbu a na-arụ ọrụ ma elu-ọsọ na-abụghị elu-ọsọ ọrụ na bụ akụkụ nke Nederlandse Spoorwegen. N'otu aka ahụ, NS International nwere ike ịme ọkara elu-ọsọ na elu-ọsọ ọrụ ndusụk ini ke nso ga-eme n'ọdịnihu.
Brussels ka Leiden Ụgbọ oloko
Antwerp ka Leiden Ụgbọ oloko
Berlin na Haarlem Ụgbọ oloko
Paris na Haarlem Ụgbọ oloko
Cross Border Ụgbọ oloko – The TGV (French: A High Speed ​​Train)
SNCF na-arụ ọrụ ndị TGV nke bụ France si intercity elu-ọsọ okporo ígwè ọrụ na nke kacha mma ala-ekesịpde mba okporo ígwè ọrụ. Ọ bụ ezie na ibido hiwere Paris, netwọk nwere, ihe karịrị afọ, gbasaa. Ọ ugbu a ejikọ isi obodo gafee France (Marseille, obere, Bordeaux, Strasbourg, Rennes) na gburugburu mba. E nwere ihe 110 nde njem a afọ na France nọkwa na TGV. Dị ka data si April 2007, TGV bụ kasị wheeled ụgbọ okporo ígwè na, eru 574.8 km / h (357.2 mph). Ị ga na-enwe ndị kasị mma mba njikọ Brussels na Belgium na Luxembourg na n'ebe ugwu na TGV ụgbọ oloko, n'ezie.
The mba TGV nọ n'ebe ọwụwa anyanwụ ga-ewe gị Frankfurt na Munich. N'otu aka ahụ, gị ndịda njem ga-ewe gị ozugbo na Milan na Italy ma ọ bụ Barcelona na Spain. Emehiela njem, TGV bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ okporo ígwè kachasị mma! Ọzọkwa, ọ ga-ewe gị na ihe ndị kasị magburu onwe ihunanya njem si Paris na n'igbere mmiri na Mediterranean. ma ọ bụ, na ọmarịcha Bordeaux, Lyon na Marseille na ụwa na-ama Cannes. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iru France na / ma ọ bụ Switzerland ụgbọ okporo ígwè, i nwere ike ime nke ahụ site na-agba na cross ókè-ala ụgbọ oloko ejikwara site TGV Lyria.
Paris na Frankfurt Ụgbọ oloko
Paris na Cologne Ụgbọ oloko
Na nke kacha mma ụgbọ okporo ígwè na ahụmahụ na ndụ gị, na mma ahịa na napụla asọ anyị oyi ntinye akwụkwọ ụgwọ, were Save A Train
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcross-border-trains-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml na ị nwere ike ịgbanwe / es na / fr ma ọ bụ / de na ọtụtụ asụsụ.
#renfe #traveleurope CrossBorder deutschebahn eurostar tgv ụgbọ oloko